Ukuhlaziywa kweLizwe Elikhulu "Yitsho into"
Ihlabathi Elikhulu - "Yithetha Into" ebonisa uKristuina Aguilera
by UBill Lamb
Ebhalwa nguIan Axel kunye neChad Vaccarino
Ekhutshwe nguDan Romer
Kukhutshwa ngoNovemba 2013 nge-Epic
Amazwi omculo kaChristina Aguilera afakwe kumxube
Ipiyano yomzwelo kunye neendlela zokucwangcisa
Akukho miphumo embi apha
Ihlabathi Elikhulu Elikhulu "Yithetha Into" ingoma yokuhlukana ne-twist. Esikhundleni sokuzaliswa ngomsindo nokuphelelwa lithemba, ingoma ebonisa intlangano enamandla yokuthobeka, ukudabuka nokuzisola.
Kugqitywe ngepiyano kunye nocwangciso lwechungechunge olongeza kwiimvakalelo ngaphandle kokulila. Ngexesha apho umculo wepop ungabikho kwii-ballads zomzwelo, "Yisho into ethi" ithetha ngokuchanekileyo.
Le ngoma evela kwi-World Great Great ibonakaliswe kumncintiswano weTV ukubonisa ukuba Ucinga ukuba Unokudansa kwi-original version yayo. Kwakuqala ukubonakala kwayo kwi-albhamu ye-albhamu yi-A Great Great World ilungu le-Ian Axel ekhululwe ngo-2011. Xa u-Christina Aguilera eve le ngoma, wachukumiseka kwaye ekugqibeleni wahlanganiswa kwinguqu ebhalwe kwakhona. Wajoyina i-duo I-World Big Great kwisigaba sokubetha "Yithetha into" ihlala kwiLizwi . Ukucula kwakhe ekurekhodini kwengeza i-resonance ekhethiweyo ecacisa ngokungathi ngumoya womthandi lowo ingoma ekuthethwa kuyo njengoko ilandelele amanyathelo okhokelo. Ngobulumko, uKristina Aguilera ugcina ilizwi lakhe likhangele kwaye uhlabe ngokukhawuleza ngexabiso lokulahleka.
Ividiyo yomculo ehamba kunye nayo iquka uKristuina Aguilera.
NgokwesiLwimi, "Yisho into" iyingqiqo. I-chorus "Yitsho into, ndiyekezela kuwe" ikhupha ngokukhawuleza imvakalelo evakalelwa xa ukhetha ukushiya ubudlelwane obungapheliyo nangona uthando luhleli. Umthandi ucela ukuba enze ingxelo ekwazi ukuguqula izicwangciso, kodwa, ubuncinane kule ngoma, akukho nto izayo.
Ilungiselelo lomtya kunye nepiyano litshona kwaye ngamanye amaxesha lusongela ukuphazamisa ilizwi elibucayi, kodwa ligcinwa likhangela. Uvakalelo lwengoma lukhuphuka kwintshukumo enamandla kodwa akalokothi athambele umphulaphuli.
I-duo Ihlabathi Elikhulu Elikhulu laqala ukufumana isaziso esasasazekayo ngaphambili konyaka xa ingoma yabo yokunyusa "Lo ngumnyaka omtsha" ibhalwe kwiGlee . Ngoku bazimisele ukunyuka phezulu nakwii-charts pop. I-albhamu yokuqala Ngaba kukho nawuphi na umntu ngaphandle Kusetyenziswe ukukhululwa ekuqaleni kuka-2014. Gcina iso kwiLizwe Elikhulu Elikhulu. Abalandeli abaninzi bepop baza kuba banomdla wokuva okungakumbi.
Ngaphambi kokukhululwa kokurekhodwa kwakhona kokuthi "Yithetha into" equkethe uChristina Aguilera, le ngoma yayithengise iikopi ezingama-52,000 kuphela. Emva kokusebenza komsebenzi kwi-Voice of theo kunye no-Christina Aguilera, "Yithetha into" eyaqala kwi-# 16 kwiBillboard Hot 100. Benza le ngoma ihlala kumaMusic Awards aseMelika eye yanceda ukuba ixhumeke phezulu kwi-10. Ekugqibeleni, "Yithetha into" ehamba kwi-# 4. Ithengise malunga neeikopi ezigidi ezihlanu. I-ballad ifinyelele phezulu kwitshati yomsakazo womntu omdala kunye ne # 3 kumsakazo omdala. Ngendlela edibeneyo, ithafa # 1 kwisatidi yomdaniso. Kwakuyi-Top Great World yokuqala yep pop kunye no-Christina Aguilera weshumi elinanye.
Yayiyesibili yonyaka wekhalenda ka-2013 emva kokusebenzisana nePitbull kwi-"Feel This Moment."
"Yithetha into" izuze ngamandla kakhulu. Iphumelele kwiGraam yeGraam ye-Pop Duo ephezulu okanye ukusebenza kweqela.
I-duo Ihlabathi Elikhulu Elikhulu lifumene ngokwenza okungalindelekanga ukuphumelela kwep pop. Ngomoya othi "Yithetha into" emhlane, i-World Big Great yaqala ngo-# 3 kwi-ishadi le-albhamu kunye ne-albhamu yabo yokuqala epheleleyo Ngaba kukho na umntu olapho ? Ulandelelwano olulodwa olulodwa "I-Home yasekuqaleni" lwaphule kwi-top top 25 kwi-radio yomsakazo omdala, kodwa lwahluleka ukuba nefuthe eliphambili lomntu.
Ihlabathi Elikhulu Elikhulu lihlanganisa i-albhamu elandelelanayo xa i-Morning Comes . Kwaye kwangaphambi komntu oyedwa "Bamba Ngamanye Omnye" owaquka amazwi avela kwi-rapper Futuristic. Ingoma yenyuka iya kwi-25 engaphezulu kwi-pop ephakamileyo, i-pop pop kunye ne-radio yangokudala kodwa ayizange ikhuphuke phezulu kune-# 99 kwi- Billboard Hot 100.
I-albhamu Xa i-Morning Comes ifakwe kwi # 75.
I-Grease Pop Songs Ifa
I-Caliban - Gravity Review
UChristina Perri- "Iminyaka Eyinkulungwane"
Ukuhlaziywa kuka-Idina Menzel "Makuhambe"
Megadeth - iDystopia Review
Ukuhlaziywa: Iggy Azalea "Inqabileyo" equkethe uCharli XCX
Ngomso - I-Jumalten Review ye-Aika
I-10 ye-Black Eyed Peas Music Videos
Hamba NgeNyanga - "Khupha noDaniso"
Ukuhlaziywa kunye nemvelaphi yeFixed Dragons '"Ndibalele Ubomi Bam"
Iingcebiso ze-Skiing Safety, Amacebiso, kunye neengcebiso
Indlela Yokugcina Ibhedi Yakho Yomile kwaye Inqande Ukunyusa
Yintoni i-Web Journalism?
Nazi iinqununu ezisiSeko zeCandelo labaSebenzi abafuna ukusebenza kwi-Journalism
Elipheleleyo Uluhlu lweentlekele zikaWilliam Shakespeare
Yiyiphi i-Persone yesiBini?
Iincwadi eziPhambili zeNgqiqo yeNkcubeko: eNgilani
Ingaba i-Assumption Ingumhla Oyingcwele?
IYunivesithi yaseDetroit Mercy GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Iziphumo zoMnqophiso wama-Aztec
Bangaphi amaMongameli aseMerika abulawa?
I-Bowling Side Game Game - Poker
I-Quiz yokuHlola ye-Grammar ephakamileyo
Isingeniso kwiiVesi ezingaqhelekanga ngesiNgesi
Abalingiswa 'Abancinci Abancinci' kunye Nezifilo Zabo
Kutheni AbaKatolika bamaRoma Bengahlabelele iAlluluya Ngethuba Lentente?
Imithetho yokuSebenza okuPhezulu kunye neNgcaciso
UMTHETHO Ulinganisa ukufakwa kwi-Big Ten
IsiFrentshi Isigama: Izambatho
IMfazwe yaseMexico naseMerika: iMfazwe yaseChapultepec
Ukukhetha igama lesiTshayina ngeNombolo yezibetha